यस्तो लेखेकी रहेछन अन्तिम स्टाटस, ड्युटी सकेकी कोपिलाले किन हा निन् आफैँलाई गो ली? – Annapurna Post News
April 23, 2022 sujaLeaveaComment on यस्तो लेखेकी रहेछन अन्तिम स्टाटस, ड्युटी सकेकी कोपिलाले किन हा निन् आफैँलाई गो ली?
कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित समशेरदल गणको ड्युटीमा तैनाथ सिपाही कोपिला राजवंशीले आफैँले गो’ली हानेर आ’त्मह’त्या ग’रेकी थिइन ।
ब्यारेकभित्र तत्काल प्रहरीलाई छिर्न नदिएको सेनाले कोपिलालाई पछि भैरहवाको मेडिकल कलेज पुर्याएको थियो । उनले ड्युटीमा छँदा बोकेकै एम १६ रा’इ’फलबाट गो’ली प्र’हा’र ग’रेकी थिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रवक्ता डीएसपी जेसी शाहले घटनास्थल प्रकृति हेर्दा आफैँले गो’ली हा’ने’को देखिने बताए। तर यसलाई थप प्रमाणित गर्न प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सिपाही राजवंशीले साँझ आफ्नै पेटमा गो’ली हा’नेको बताइन्छ । ड्युटीमा रहेकी उनले आ’त्मह’त्या ग’र्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । उनले आफैँले बोकेको एम १६ राइफल चलाएकी हुन् । नेपाली सेनाकी सिपाही कोपिला राजवंशी कपिलवस्तुको शमशेर दल गणको १३ नम्बर पोस्टमा ड्युटीमा थिइन्।
साँझ ६ बजे उनको ड्युटी सकिँदै थियो। सवा ६ बजेभित्रमा अर्को सिपाहीलाई ड्युटी बुझाएर उनी ब्यारेक फर्किने थिइन्। दिउँसो २ बजेदेखि ६ बजेसम्म थियो उनको ड्युटी।
प्रहरी पुग्दा १३ नम्बर पोष्ट रगताम्मे थियो। कोपिला छटपटाइरहेकी थिइन्। उनलाई तत्काल अस्पताल लगियो। कोपिलालाई उपचारका लागि काठमाडौं लैजान नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर बोलाइएको थियो। तर सेनाको हेलिकोप्टर पुगेन।
उनलाई भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचारको लागि भर्ना गरियो। भोलिपल्ट बिहान ५ बजेर १७ मिनेटमा अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरिदियो। २४ वर्षीया कोपिला सेनामा भर्ती भएको ३ वर्ष ८ महिना भएको थियो। केही दिनपहिले मात्रै उनी घरबिदामा गएर फर्किएकी थिइन्। कोपिलाकै बलमा घरमा जग उठाइएको छ।
पिलर ठडिएको घर उनकै बलमा बनाउने परिवारको योजना थियो। दाजुले गत महिना मात्रै जागिर छाडेका थिए। उनी गरिमा विकास बैंकमा काम गर्थे। ‘प्रहरीले तत्कालै घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। शव पनि उनीहरुले नै लगेर परीक्षण गरिसकेका छन्।